Sina Custom Custom MOQ Plain Gift Foam Mesh Trucker Hat Cap orinasa sy mpanamboatra | Weaver
Satroka mpitondra kamiao
Custom na tsotra
Kitapo maso fito plastika, na arakaraka ny takinao
Fotoana fitarihana ohatra:
L / C, T / T, Union Weatern
Tianjin, na araka ny takinao
Fonosana: 50 pcs amin'ny polybag iray, avy eo polybag 4 ao anaty baoritra. Haben'ny carton: 68 * 45 * 38cm na toy ny takiana aminao. Tsy marina ny Ali express, azafady mba mifandraisa aminay mba hamafiso ny sarany mazava.
Quantity (Pieces) 1 - 1000 1001 - 10000 > 10000
Est. Time (andro) 10 14 Hifampiraharahana
Ity satroka ao am-pivarotantsika ity dia afaka manome satroka banga kamiao tsy misy banga,
Ary izahay dia afaka manome satroka fanaovana pirinty ho an'ny kamiao miaraka amina logo manokana sy volavolanao.
Ny satroka kamiao tsotra dia afaka mamonjy ao anatin'ny 3 andro.
Ny fanaovana pirinty satroka trucker foam dia afaka mamoaka delestazy amin'ny andro 5-7andro raha toa ka latsaky ny 5000 pcs ny baikonao.
Ny moq ho an'ny satroka stock dia 1 pc,
ho an'ny satroka fanaovana pirinty logo ho an'ny pirinty dia 20pcs isaky ny loko / famolavolana.
Ny fanontana dia mety ho famindrana hafanana, fanamasinana, fanontana lamba, fanontana UV ary fanontana feno.
Manana satroka kamiao kamiao marobe izahay mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Raha mila loko vaovao manokana ianao, dia afaka manokana ho anao koa izahay.
1.Fabric 100% polyester (foam & harato)
2.Color mena, volomboasary, maitso fluorescent, lanitra manga,…
3.Size 58cm, ny habe azontsika ampanjarina
4.Logo Plain na pirinty (famindrana hafanana, fanamasinana, efijery, fanontana UV)
5.Sweatband / lining polyester, isika koa dia afaka manao landihazo, lamba mahasalama
6.Backclosure fanakatonana buckle plastika, azontsika atao ihany koa ny manamboatra vy, «tape» majika…
7.Leadtime santionany: 3 andro fiasana, famokarana betsaka: 21 andro aorian'ny fanamafisana ny fanamboarana
8.Packing 50 pcs / poly / polybag, 200 pcs / baoritra 68 * 48 * 45cm
9.Fomba fandefasana Amin'ny rivotra, an-dranomasina na an-dranomasina, toy ny Fedex, DHL, UPS na TNT
10.Port Tianjin, Shanghai, na seranana hafa
11. Fepetra fandoavana L / C, T / T, Western union, Money gram, Bank Transfer
1.Ny fitaovana dia isan-karazany, manana landihazo, acrylic, canvas, corduroy, volon'ondry, nylon, hoditra, poly-landihazo, volon'ondry mifangaro sns isika amin'ny safidinao.
2.For sary famantarana, manana amboradara, vita pirinty, patch hoditra, logo vy, applique izahay, afaka zakanay araka ny fangatahanao.
3.Mamatsy serivisy OEM sy ODM izahay, tonga amin'ny fanao mahazatra ny welcom.
Fomban'ny logo ho an'ny satroka trucker foam
hafanana famindrana hafanana fanontana pirinty pirinty UV pirinty
Dingana famokarana satroka kamiao
Mba andefaso fanontaniana iray eto izahay.
Fanontaniana 1: Inona ny kaomandinao farany ambany?
Valiny: ny baoty kamiao mpamily satroka busa dia 1 pcs isaky ny loko isaky ny endrika
Fanontaniana 2: Afaka manana ny endriny / marika / sary famantarana ny vokatra ve isika?
Valiny: Sure.OEM / ODM dia tongasoa.
Azontsika atao ny mametraka ny sary famantarana sy marika anao amin'ny satrokay / satrokay, hanao maneso ihany koa izahay ho an'ny fanamafisana alohan'ny handefasanao filaminana.
Fanontaniana 3: Inona ny fotoana itarihana ny santionany sy ny famokarana? Ohatrinona ny santionany?
Valiny: Tokony ho 5 andro ny santionany ary 14 andro ny famokarana betsaka. Ny fotoana tena izy dia miankina amin'ny volavolanao sy ny baikonao qty. Afaka nandefa ny santionany aminao izahay fa voampanga ireo santionany. Aorian'ny fanamafisana ny baiko dia averinay ny sarany santionany.
Fanontaniana 4: Manao ahoana ny fizotry ny filaharana?
Valiny: Hamafiso ny masontsivana satroka -> hamafiso ny vidiny -> porofo -> hamafiso ny santionany -> sonia fifanarahana, fandoavam-bola ary alamino ny famokarana betsaka -> famaranana ny famokarana -> fizahana (sary na vokatra tena izy) -> fandoavam-bola -> fandefasana -> serivisy aorian'ny varotra.
Fanontaniana 5: Inona ireo fepetra fandoavam-bola ekena?
Valiny: Manaiky fandoavam-bola alibaba azo antoka izahay. Paypal, union tandrefana, T / T na L / C amin'ny fahitana, mandoa vola 50% fotsiny ianao hanombohana ny famokarana ary ny fandanjana dia tokony aloa alohan'ny halefa. Manohana ny fiantohana ara-barotra ihany koa izahay, izay manome antoka ny fandoavanao antoka sy fandefasana ara-potoana.
Fanontaniana 6: Ahoana no ahazoanao antoka ny kalitao?
Valiny: Manana mpiasa voaofana tsara sy matihanina izahay ary rafitra QC henjana amin'ny rohy famokarana tsirairay. Ary ny vokatra tsirairay dia tokony hojerena 100% alohan'ny fandefasana.